Ogaden News Agency (ONA) – Falastiin oo Ku Gacansaydhay Qorshaha Israel ee Masjidka Al-Aqsa.
Falastiin oo Ku Gacansaydhay Qorshaha Israel ee Masjidka Al-Aqsa.
Posted by ONA Admin	/ July 27, 2017
Maamulka Falastiin ayaa gabi ahaanba diiday qorshaha Israel ay ku dooneyso in ay ku faro galiso maamulida Masjidka Barakaysan ee Al-Aqsa ee magaalada Al-Qudus taas oo xiisad adag ay ka taagnayd indhawaale ba.
Xiisada ka taagneyd isbaarooyinka iyo baadhitaanada Israel ay ku heyso dadka masaajidka ku cibaadaysanaya ayaa keenay todobaadyadii lasoo dhaafay rabshado ay ku dhinteen in ka badan 5 qof. Israel ayaa shalay qaaday isbaarooyinkii ay hordhigatay Masaajidka halkaasi oo lagu baadhi jiray dadka balse waxay doonaysaa in ay goobahaasi ku rakibto qalab kale oo casri ah oo la soconaya dhaq dhaqaaqa dadka masjidka galaya.
Maxamuud Cabaas Madaxweynaha Falastiin ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin talaabo walba oo ay Israel kudooneyso in ay ku faro geliso nidaamka iyo maamulida masaajidka Al Aqsa. Xili ay wali sii socdaan mudaharaadyada looga soo horjeedo Israel. Shacabka muslimiinta ayaa wali ku tukanaya banaanka Masaajidka iyagoo diidan in ay aqbalaan xanibaada iyo basaasida ay Israel dooneyso in ay ku rakibto iridaha laga galo Masjidka Al-Aqsa.